याक्चना–मूलघाट व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ – Mission Khabar
याक्चना–मूलघाट व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ
mission २३ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:२६
धनकुुटा : धनकुुटा नगरपालिकाले तमोर नदीमा साहसिक खेल र्‍याफ्टिङको सुुरुवात गरेको छ । नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै धनकुुटा नगरपालिका वडा नं. ९ को याक्चनाटारदेखि वडा नं. १० को मुुलघाटसम्म छोटो दूरीको व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ सुुरु गरेको हो । व्यावसायिक र्‍याफ्टिङको उद्घाटन उपमेयर शकुुन्तला बस्नेतले बोटमा चढेर गरेकी थिइन् । व्यावसायिक रूपमा र्‍याफ्टिङको सुुरुवात गर्न इटहरिस्थित रिभर डिप प्रालिले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
केही दिनअघि मात्रै तमोर नदीमा र्‍याफ्टिङको व्यावसायिक परीक्षण गरिएको थियो । प्रालिका सञ्चालक सुुरेश बस्नेतले छोटो दूरीमा आधा दर्जनभन्दा बढी र्‍यापिट भएका कारण यो रुट र्‍याफ्टिङका लागि प्रचुुर सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘र्‍याफ्टिङ गर्दा एकपछि अर्को र्‍यापिट भएको देखियो । कुुनै जोखिम पनि छैन’, उनले भने, ‘नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको खण्डमा व्यावसायिक र्‍याफ्टिङको सम्भावना बढी छ ।’
र्‍याफ्टिङका लागि तमोर नदी देशकै तेस्रो उत्कृष्ट गन्तव्य भएको उनले बताए । मुुलघाटदेखि चतरासम्मको यात्रामा नभएको र्‍यापिट छोटो दूरीमा भेटिएको उनको दाबी छ । र्‍याफ्टिङको मज्जा लिन आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पर्याप्त मज्जा लिन पाउने उनले बताए ।
याक्चनाटारदेखि मूलघाटसम्म करिब १६ किलोमिटरको यो यात्रा छोटो र रमाइलो हुुने विश्वास गरिएको छ । यो दूरी पार गर्न र्‍याफ्टिङबाट बढीमा एक घण्टा लाग्छ । एक घण्टाको दूरीमा आठदेखि नौवटासम्म र्‍यापिट छन् । विगत केही वर्षदेखि मूलघाटदेखि चतरासम्म र्‍याफ्टिङ सञ्चालन भइरहेको छ । धनकुुटा सदरमुुकामदेखि करिब ४५ मिनेटको सवारी यात्रापछि याक्चनाटार पुुग्न सकिन्छ ।
धनकुुटा नगरपालिकाकी उपमेयर शकुुन्तला बस्नेतले तमोर नदीमा व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् । याक्चनासम्म आउने बाटो कच्ची रहेका कारण ठूला गाडी आउन समस्या छ । बजेट विनियोजन गरेर सडकको स्तरोन्नति र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताइन् ।
नगरपालिकाले पछिल्लो समय आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सम्भावना अध्ययन थालेको पर्यटन शाखा प्रमुुख विकास अधिकारीले बताए ।
पूर्वका पर्यटन व्यवसायी सुुनिल भुुसालले धनकुुटा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सम्भावना रहेको जिल्ला भएको बताए । तमोर नदीले घेरेको धनकुुटामा स्थानीय तहले लगानी गरेको खण्डमा धेरै पर्यटक आउनसक्ने उनले दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हामी पर्यटक ल्याउँछौं । तर सरकारी पक्षबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुुन आवश्यक छ ।’ सरकारी तवरबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको खण्डमा धनकुुटामा पर्यटक भिœयाउन कुुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।